Fiaramanidina dimy amin’ny folo eo anivon’ny orinasa Air Madagascar amin’izao no afaka miasa ara-dalàna, araka ny fanambaran’ny tale jeneraliny omaly. Simba avokoa ireo dimy ambiny ireo, antony tsy hahavitan’ny Airmad ny asa tokony hotanterahiny toy ny mahazatra isan’andro. Hidirana fatiantoka tanteraka araka izany ity orinasa iray ity.
Velon-taraina sy mikaikaika noho ny fatiantoka mianjady amin’izy ireo ireo mpamongady eny amin’ny tsenan’Anosibe. Voakasik’izany manokana ireo mpivarotra vary avy any ivelany izay fantatra fa zary tsy mahalafo intsony hatramin’ny niakaran’ny vary zanatany eto amintsika. Efa tena miparitaka eny an-tsena tokoa mantsy ny vary gasy sy ny vary aloha amin’izao.
LALANA MIFEHY NY FIFAMOIVOIZANA
Tokony hasiam-panavaozana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana eto amintsika, hoy ny filohan’ny ASTRAM Rakotondrafara Fredinard. Izay ihany no vahaolana hahafahana miady amin’ny tsy fandriampahalemana mahazo ireo taksibrosy eny an-dalana, hoy ity filohan’ny ASTRAM ity. Nomarihiny manokana moa fa efa tena lany andro tanteraka ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana eto amintsika.
TANORA TSY AN’ASA
Mbola olana goavana eto amintsika ny tsy fahitan’ireo tanora malagasy nahavita fianarana, asa mifanaraka amin’ny fari-pahaiza ananany. Mahatratra 300 000 eo ho eo izy ireo, amin’ny ankapobeny, antony nikarakaran’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena ilay hetsika « journée d’orientation », omaly teto an-drenivohitra.